उत्तम एन्ड्रोइड फोनहरू: परीक्षणहरू, सुरुवातहरू, अफवाहहरू ... | Androidsis
के तपाई नयाँ मोबाईलको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ जुन एन्ड्रोइड मा मार्केटमा हिट छ? के तपाइँ नयाँ मोबाइल खोज्दै हुनुहुन्छ र अझ राम्रो छनौट गर्न सूचना लिन चाहानुहुन्छ? यहाँ तपाईं एन्ड्रोइड मा बजार पुग्न कि मोबाईल को बारे मा सबै जानकारी को लागी पहुँच गर्न सक्षम हुनेछ। यस तरीकाबाट, तपाईं तिनीहरूको बारेमा धेरै साधारण तरीकाले जान्न सक्नुहुनेछ।
समाचार, समीक्षा वा एन्ड्रोइड फोनका सबै प्रकारका विवरणहरू, बजारको मुख्य ब्रान्डबाट, साथै नयाँ निर्माताहरू जुन स्टोरहरूमा आइपुगेका छन्। यस कोटी मा तपाई यी एन्ड्रोइड फोनहरु को बारे मा जान्न चाहानु सबैको खोजी गर्न सक्षम हुनेछ। यी कुनै पनि समाचार नछुटाउनुहोस्।
कुन एन्ड्रोइड मोबाइल किन्न?
तपाईको मोबाईल भविष्य छनौट गर्न मद्दतको लागि, तल तपाईले केहि गाईड गाईडहरू भेट्टाउनुहुनेछ जसमा तपाईले आफ्नो आवश्यकतालाई उत्तम सूट गर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई कुन रोज्नुहुन्छ?
२०१ of को सर्वश्रेष्ठ मोबाइलहरू
२०१ of को शीर्ष १० मोबाइलहरू
बजारमा १० सर्वश्रेष्ठ मोबाइलहरू
300०० भन्दा कम युरोका लागि फोनहरू
२०० भन्दा कम युरोका लागि उत्तम मोबाइलहरू
१०० यूरो भन्दा कमको लागि चिनियाँ मोबाईलहरू
यसको विशेषताहरु अनुसार
Android One को साथ सर्वश्रेष्ठ मोबाइलहरू
सर्वश्रेष्ठ क्यामेराको साथ फोनहरू
ब्रान्डद्वारा एन्ड्रोइड फोनहरू
यदि तपाईं आफ्नो अर्को एन्ड्रोइड मोबाइलको ब्रान्डको बारेमा एकदमै स्पष्ट हुनुहुन्छ भने, निम्न सूचीमा तपाईंले भर्खरको समाचारहरू पाउनुहुनेछ र विश्वको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण Android मोबाइल कम्पनीहरूको प्रक्षेपण पाउनुहुनेछ।
जहाँसम्म एन्ड्रोइड मोबाईलहरू चिन्तित छन् यी सबै प्रतिनिधि निर्माणकर्ताहरू हुन्। त्यहाँ धेरै निर्माताहरू छन्, विशेष गरी चिनियाँ, तर एक तरीकाले यी शीर्ष विक्रेताहरू हुन् गुगलको मोबाइल अपरेटिंग प्रणालीका प्रयोगकर्ताहरू बीच।
एन्ड्रोइड मोबाइलको बारेमा अधिक समाचार
Huawei P50 पहिले नै एक वास्तविकता हो: यसको विशेषताहरु, मूल्य र आधिकारिक प्रक्षेपण थाहा छ
द्वारा दानीप्ले बनाउँछ 40 सेकेन्ड .
Huawei आज अन्ततः दुई नयाँ P50 श्रृंखला स्मार्टफोन को घोषणा गरीयो। त्यहाँ दुई को लागी फ्ल्यागशिप हुनेछ ...
Xiaomi Poco X3 GT: एक 120 हर्ट्ज स्क्रीन र Dimensity 1100 को साथ नयाँ गेमिंग मोबाइल
द्वारा आरोन रिवास बनाउँछ7घण्टा .
Xiaomi ले गेमिंग खण्ड को लागी बजार मा एक नयाँ स्मार्टफोन शुरू गरेको छ, र यो Poco X3 GT हो ....
द्वारा आरोन रिवास बनाउँछ १ महिना .
शाओमीले बजारमा एक नयाँ मध्यम-प्रदर्शन टर्मिनल सुरू गर्यो, जुन रेडमी नोट १० टीको रूपमा आउँछ। पूर्व ...
द्वारा दानीप्ले बनाउँछ १ महिना .
एशियाई निर्माता Realme एक धेरै महत्त्वपूर्ण ब्रांडको रूपमा स्थापित गरिएको छ, मूल्यमा बिभिन्न मोडेलहरू प्रस्ताव गर्दै ...
प्राइम डे: मोबाईल र स्मार्टवाचमा बार्गेनहरू जुन तपाईं अझै पनि फाइदा लिन सक्नुहुन्छ
अमेजन प्राइम डे २०२० प्रविधि, घर र गृह स्वचालनका थुप्रै रोचक प्रस्तावहरूसहित सुरु भयो, अन्य थुप्रैमा ...
पोको एम Pro प्रो, रेडमी नोट १० एस र रेडमी नोट १० प्रो अपरिष्कृत मूल्यमा
मोबाइल उपकरण र स्मार्टवाचले बजारमा वजन बढाइरहेको छ, उत्पादनहरू मध्ये दुई ...
प्ले स्टोरमा त्रुटि कोड 910 कसरी ठीक गर्ने
उत्तम अपरेटिंग प्रणाली जस्तो त्यहाँ कुनै चीज छैन। त्यहाँ कुनै पनि १००% सुरक्षित अपरेटि system प्रणाली छैन। सबै अपरेटिंग प्रणालीहरू अति संवेदनशील छन् ...
यस सुरुवात प्रमोशनको साथ सबै भन्दा राम्रो मूल्यमा पोको एम Pro प्रो पाउनुहोस्
पोकोफोन बजारमा असंख्य उपकरणहरूका साथ निर्माता बन्यो जुन द्वारा विचार गरिनु पर्छ ...
यदि तपाईं एक महान क्यामेराको साथ फोन खोज्दै हुनुहुन्छ भने, क्युबोट एक्स 50 लाई नहेर्नुहोस्
नयाँ शीर्ष-क्याच क्यामेरा स्मार्टफोन, क्युबोट एक्स finally० अन्तमा आज बिक्रीमा गइरहेको छ।
क्युबोट एक्स :०: MP 50 MP क्वाड क्यामेरा स्मार्टफोन सस्तो मूल्यमा
द्वारा दानीप्ले बनाउँछ3महिना .
आज तपाईंको मोबाइल फोनमा राम्रो क्यामेरा हुनु महत्त्वपूर्ण छ। यद्यपि स्मार्टफोन क्यामेरा त्यस्तो छैन ...
सैमसंग टर्मिनलहरूको लागि आधिकारिक फर्मवेयरहरू डाउनलोड गर्ने तरिका
नयाँ लेनोवो S5 प्रो: 6.3 ″ FHD + प्यानल, SD636 र अधिक
शाओमी ब्ल्याक शार्क २ सँग पहिले नै प्रस्तुतीकरण मिति छ
ZTE Axon9Pro आधिकारिक छ: .6.21.२१-इन्च AMOLED, स्न्यापड्रैगन 845, Android .8.1.१ Oreo र अधिक
ZTE यो Nubia Z18 प्रस्तुत हुनेछ यस सेप्टेम्बर5मा
HTC U12 + सँग धेरै सुधारहरू र CryptoKitties सँग नयाँ अपडेट हुन सुरू हुन्छ
लेनोवोले new नयाँ एन्ड्रोइड ट्याब्लेटहरू घोषणा गर्दछ जुन एन्ड्रोइड गो संस्करणको तीन हो
ZTE Axon9Pro अन्तिम डिजाइन प्रकट भयो
BQ एक्वेरिस सी लॉन्च गरियो: HD + डिस्प्ले, स्न्यापड्रैगन 425२8.1, Android .XNUMX.१ Oreo र अधिक
पुष्टि भयो: ZTE ले क्सन present प्रस्तुत गर्ने छ यस अर्को 9० अगस्तमा
सोनी Xperia XA3 Plus Geekbench मा देखा पर्दछ: कुञ्जी चश्मा प्रकट भयो
मोटो P30 को पहिलो रेन्डरर फिल्टर गरियो